Ogaden News Agency (ONA) – Somaliya ma fahamtay hadda dhibuu ku hayay KT Meles
Somaliya ma fahamtay hadda dhibuu ku hayay KT Meles
Posted by ONA Admin	/ August 29, 2012
Ugu horeyn shacabka S.Ogadenya guud ahaan, gar ahaan madaxda iyo xubnaha Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) waxay u hambal-yaynayaan Prof Maxamad Sheekh Jawaara, waxayna u rajaynayaan inuu Ilaahay ku guuleeyo xilka culus ee loo doortay marxaladdan ay umadda Somaliyeed mareyso.
Doorashada Prof. M. Sheekh Cisman Jawara sinaba lagama yaabo inay u hirgali lahayd haduu noolyahay KT Meles. Qofkii arintaa shaki ka qaba dib ha ugu noqdo siyaabahii lagu soo xuli jiray madaxda sare ee Somaliya intuu noolaa Meles Zanawi. Waxay Itobiya qortay –Tilmaamaha laga doonayo Qofka Jaga sare ka Qabanaya Somaliya-, waxaana ugu horeeyay inuusan Madax ka soo noqonin Xukuumadii Maxamad Siyaad Barre. Haduu ka soo noqdayna waa inuu ku dambeeyay mucaaradkii hubaysnaa ee ku xidhnaa Mingisto haile Mariam. Haduusan ka mid ahaan jirin kuwaa, waa inuu ka mid noqday Dagaal-oogayaashii shacabka wax ka soo gumaaday ee hubka ka qaadan jiray Meles Zanawi. Haduusan intaa midna ahayn waa inuu yahay qof aqoon siyaasadeed iyo mid aduunyo toona aan ogayn oo wixii la doono loo yeedhin karo sida 2daii Shariif.
Arinta ugu muhiimsan ee Itobiya ay ka ilaalin jirtay Somaliya masuul inuu ka noqdo waxay ahayed –Wadinyad – iyo inuu yahay qof iskala weyn saajinka Itobiya ee fariimaha loogu soo dhiibi jiray madaxda Somaaliya. Arintaa waxaa laga hayaa qaar badan oo arimaha Somaliya ku dhex jira. Waxayna ka mid ahayd arinta dullaynta iyo ixtiraam la’aanta waxa ugu badan ee Cabdulaahi Yusuf iyo Itobiya ay ku kala boodeen sababtoo ah wuxuu ahaa sarkaal Somaliyeed oo isla weyn, inkastoo ay siyaasad xumadiisa la gashay inuu cadawgii umadda u soo adeegsado danahiisa gaarka ah taasoo ku dambaysay inay daaqada ka tureen markay ku dan gaadheen. Ugu dambayntiina waa isagii shalayto iyo hala’iga raali ahaado ku dhintay.
Calaa kuli xaal, labadii bilood ee Itobiya ay isku mashquulsanayd ee la qarinayay xaaladda uu ku suganaa Meles oo isbitaalada Yurub sariir ama qaboojiye mid un kagag jiray, ayay Somalida ka faa’idaysteen, waxayna markii ugu horeysay tan iyo burburkii dajiyeen sifooyinka laga doonayo qofka ka mid noqonaya Baarlamaanka oo ka duwan 100% midkii ay Itobiya u dhigtay. Waxaa sidaa ku hadhay koox badan oy Itobiya ugu shaqaysan jirtay siyaabo kala duwan sida; Jahli, Danaysi, Dhuuniraac-nimo, Fulaynimo, Reerkayga, iyo qaar hangool ugu jiray oy asraar ka hayeen. Inkastoo markii dambe la soo fasaxay kuwaas, iyagoo dana kale laga leeyahay, hadana waa fara ku-tiris aan door muuqda qaadan doonin ka baxsan jaajuusnimad qaar ka mid ah kuwa la soo fasaxay ay ku caan baxeen.
Natiijadii 1aad waxay noqotay in la doorto Prof. Maxamad Sheekh Cisman Jawara oo u muuqda xag aqoon iyo waaya-aragnimo siyaasdeedba inuu yahay shaqsi ka saari doona baarlamaanka Somaliya heerkii uu horey u joogay ee ahaa suuq lagu gorgortamo codka oo lagu kala iibsado, marna kuraasta iyo feedhka la’isla dhaco.
Waxaa hadhay jagooyinka qaran; Madaxweynaha iyo Raisal-wasaaraha oo maalmaha soo socda la dooran doono.